Apple inobvisa matambo eApple 14 kubva kuchitoro chayo cheUS | Ndinobva mac
Nyamavhuvhu yave pedyo nekona uye maawa mashoma apfuura isu takaziva nhau nezve EEC kunyoreswa kwematanhatu emhando itsva dzeApple Watch naApple, uyezve tinofanirwa kutaura nezve smartwatch yekambani uye chinhu chenhau chinoreva kubviswa kwemhando dzinoverengeka dzemabhande muzvitoro zveUS kwouya pachena.
Zvikurukuru isu tiri kutaura nezve gumi nemana mamodheru anowanikwa kune chishandiso chakamira kutengeswa muzvitoro. Izvi zvinogona kuve nezvazvinoreva zvakawanda asi zvinouya mupfungwa pakutanga ndezvekuti hazvina kutengeswa sezvavaitarisira kana kuti kungoti "chiuno" uye mabhanhire akajairwa achagamuchira shanduko munguva pfupi inotevera.
Iko kuchinja kungave kuri nekuda kwemavara matsva kana dhizaini, asi zvakare nekuda kweiyo nyowani yekumodera modhi?
Pakutanga hapana runyerekupe rwekuti kambani iri kuronga kuchinja dhizaini yeiyo wachi, asi chokwadika, neApple haungazive. Kwechinguva, zviri pachena ndezvekuti vashandisi veReddit vanoverengeka vataura nezvekutsakatika kwesitoko kweyevhi yegreen, tahoe bhuruu, mwenje, pink, pakati pehusiku mhute uye khaki cargo "loop" tambo. Denga rebhuruu, navy green, denim bhuruu, yepepuru, ndimu, cargo khaki / nhema, pink / pearl uye nhema / chena haichakwanisike kune akajairwa modhi.
Izvo zvinoita sezviri pachena ndizvozvo zvishongedzo zveiyi Apple Watch zvakakosha kwazvo kuCompertino firm, iyo yega yega inowanzo kuburitsa mhando nyowani dzemabhanhire, ane dhizaini yemarudzi ese uye neyakasiyana mavara. Iye zvino havasati vaburitsa mamodheru matsva kwenguva yakareba, vachamirira kuratidzwa kweiyo Series 4 wachi inotevera mwedzi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Apple inobvisa mabhande gumi nemana kubva kuApple Watch muzvitoro zveUS
Tora zvinopfuura mazana matatu matemplate eExcel ye300 chete euro